qiso galmo ah | shumis.net
Home » galmada » qiso galmo ah
qiso galmo ah
walaal waxaan idinka rabaa duco qisadan ayaa igu dhacday
walaal waxaan is baranay wiiil markii aan imid qurbaha waxaanu ii muujiyay kalsooni aad u weyn lakiin waxaan ogaaday in ay been ahayd oo dabin uu ii dhigayay oo waxuu un dooonayay inuu ka faa,idaysto quruxdayda oo uu igu dheelo.
deedna wiilkiii waan jeclaaday mudo sanad ah markaan wada soconay,
oo aan si fiican isku dhex galnay ayaa maaalin meel dalxiis aanu u yara aadnay deedna xilidanbe ayay noqotay, intii aanu joognay meeshii wiilkii ayaa iga dalbaday inan xidhiidh shahwaadka(Galmo) ah sameeno aniga waan yara diiday lakiin maaha amarku mid aan anigu leeyay meel cidlo ah aan joognay oo guri ah oo adeerkii lahaa oo cidlo ah.
wiilkii wuu ii hanjabay anigoo naftayda u baqaayo ayaan ka ogolaaday, kadib markuu hawshiisii dhameestay ayuu iyidhi orad naayaa tag gurigiinii, anigu halkan adeerkay ayaan joogayaa,adeerkay markuu guriga imaado ayaan ka soo baxayaa, haye ayaan ku dhahay anigoo murugeysan, intaas uun haduu dhibtiisu ku koobnaan lahayd ciil ma qabeen.
wiilka waxay sxb ahaayeen walaalkay, muusan isku kaaya aqoon inaan walaalo nahay, walaakayna asagana sidookale wiilka in aan xiriir leenahay muusan ogeyn, wiilkii maalin ayuu tusay walaalkaysawirkayga markaas buu ku dhahay gabadhaan yar sxb ka waran ma quruxbadantay? walaalkay wuu yaabay,haa ayuu ku yidhi ee maxaa isku tihiin? asagoo iska dhigayo in uusan i aqoon, markaasuu buu wiilki wecelka ahaa ku yidhi waar sxb waxbo iskuma nihine intaan maalin meel cidlo ah geestay oo guriga adeerkay ah ayaan ka dhargay, oo sabtidii xaafadooda maysan joogin. walaalkay oo cararaya ayaa ii imid oo igu yidhi kaalay nayaa ma sharaftayda ku ciyaartay maxaa saas u sameesay ee sxbkay kuu geeyay? walaalkay ima siin jaanis aan wax ugu sheego oon ku dhaho waa leykhasbay oo naftayda ayaan u baqay, waana ley khiyaamay. familkayga oo idil ayaa warki ka war helay, hooyaday macaan waxay igu caydaa qarac ayaad sidaa ayaan u maleenaya ee is dil nayaa.
mana is baadhin waayo waxaan ka walwalsanahay in leygu dhaho uur ayaad leeday plzz walaal ii soo duceeya waxaana kula dardaamayaa gabdhaha soomaliyeed, in ay sharaftooda ilaashadaan oo aysan waligood foojidnaadaan, wiilashana waxaan leeyahay walaalayaalow ihablaha dhibta ka dayaa plzz .. ILAAHAY waxa iiga baridaan inan waxbo u dhalin wiilkaas iyo in Alle qalbigiisa ka saro xumahaa uu ku wado hablaha soomaaliyeed, ILAAHAYNA danbiga uu iga galay haka abaalmariyo, aad buu ii xumeeyey wiilkaas.
Title: qiso galmo ah